Margarekha डा. गोविन्द केसी पत्रकारसँग हिक्कहिक्क गर्दै किन रोए – Margarekha
डा. गोविन्द केसी पत्रकारसँग हिक्कहिक्क गर्दै किन रोए
काठमाडौं : २७ औं दिनमा १५ औं अनसन तोडेका डा. गोविन्द केसी मंगलबार पत्रकारसँग हिक्कहिक्क गर्दै रोए। अनसन बस्दा बिरामीको उपचार गर्न नपाएकोमा डा. केसीले आँसु झारेका हुन्।
भुइमा आँसु खस्न नपाउँदै उनले हत्केलाले पुछे। रुँदै बिरामीसँग क्षमा मागे। ‘यत्तिका दिनसम्म बिरामीको सेवा गर्न पाइन’, डा. केसीले रुदै भने, ‘त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु।’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग पूरा गराउन उनी १५ औं पटकसम्म कठोर अनशन बसे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीले बिरामीका हातखुट्टा छुन नपाउँदाको पीडा आँसुमा व्यक्त गरे। लामो समयसम्म अनशन बसेका केसी आफन्त र विद्यार्थीको रेखदेखमा छन्। तर, अझैसम्म उपचारमा जुट्न सकेका छैनन्।
६१ वर्षीय डा. केसी पत्रकार सम्मेलनमा डाँको छोडेर रोएपछि सञ्चारकर्मी स्तब्ध बने। दाइको अवस्था देखेर सम्हाल्न भाइ किशोर अघि सरे। आफ्ना गुरु रोएको देखेपछि एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी पनि दुःखी भए।
लामो अनसनपछि उपचारमा रहेका डा. केसी नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका हुन्।
बिरामीको सेवामा सक्रिय हुन नपाउँदाको प्रसंग उठ्ने बित्तिकै उनी भावुक बनेका हुन्। बोल्दाबोल्दै केही बेर रोकिए। फेरि बोल्न खोजे, सकस भयो। मुन्टो घोप्टो लगाएका केसीको मुखबाट शब्द निस्किएन। एक्कासी रुवाइको डाँको फुट्यो। भोक थाम्ने केसीले आँसु रोक्न सकेनन्।
साउन १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायत जिम्मेवार नेताको पहलपछि उनले १५ औं पटकको अनशन टुंग्याउने सहमति गरेका थिए। मंगलबार नौ बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता घर्किन दुई दिन बाँकी रहँदा उनी ध्यानाकर्षणका गराउन सञ्चारकर्मीको सहारा लिंदै थिए।
उनले कठोर हुँदै भने,‘तोडमोड नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन शीघ्र जारी हुने विश्वास लिएको छुँ। त्यसमा छलछाम भएको खण्डमा कडा भन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने छुँ।’ जुम्ला र काठमाडौंमा अनशन बसेका केसीले फेरि अनशन बस्ने अवस्था आउन नदिन संसदबाट अविलम्ब ऐन जारी गर्न माग गरे।
सहमतिको आठौं बुँदामा भएको सहमति अनुरुप मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई स्मरण गराए। चिकित्सा शिक्षा ऐन बाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नेलगायत सम्झौताका बाँकी ६ बुँदालाई समेत कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बिसन्चो भएका कारण बिरामीको उपचारमा संलग्न हुन नसकेको उनले बताए। ‘अलि ठिक भयो भने एक दुईदिनपछि उपचारमा जुट्नु पर्ला’, डा. केसीले थपे।अन्नपुर्ण पोष्ट्बाट
२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०६:५१ प्रकाशित